Feedhyahanka Tyson Fury Oo Diiday In Kulanka Ku Celiska Ah Ee Deontay Wilder Uu Emirates Stadium Ka Qabsoomo Iyo Garoon Koox Wayn Oo Uu Doortay. - Gool24.Net
Feedhyahanka Tyson Fury Oo Diiday In Kulanka Ku Celiska Ah Ee Deontay Wilder Uu Emirates Stadium Ka Qabsoomo Iyo Garoon Koox Wayn Oo Uu Doortay.
Sabtidii la soo dhaafay waxaa Los Angeles ka qabsoomay kulan wayn oo ahaa feedhka miisaana culus kaas oo dhex maray Tyson Fury oo dalka Ingiriiska u dhashay iyo waliba feedhyahanka haysta suunka dahabka ah ee feedhka miisaanka culus ee Deontay Wilder oo u dhashay dalka Maraykanka wuxuuna dagaalkii sida wayn loo sugayay ku dhamaaday barbaro cajiib ah.
Anthony Jashua oo aan waligii soo guuldaraysan ayaa doonayay in uu dagaal taariikhi ah la galo Deontay Wilder laakiin hadda wax walba waxay u muuqdaan in Tyson Fury iyo Deontay Wilder ay samaysan doonaan kulan ku celis ah si ay u kala baxaan.
Deontay Wilder ayaa si cad u sheegay in aanu la dagaalami doonin Anthony Jashua sanadka cusub ee 2019 balse uu Tyson Fury u qalmo in uu la samaysto kulan ku celis ah sidaas oo kale Fury ayaa xaqiijiyay in uu jiri doono kulan ay iskugu soo laaban doonaan Deontay Wilder kaas oo markan ka qabsoomi doona dalka England.
Laakiin arinta xiisaha badan ayaa ah in feedhyahanka reer England ee Tyson Fury uu haddaba shaaciiyay halka uu doonayo in uu ka qabsoomo dagaalkooda labaad ee Wilder wuuxuna iska diiday in lagu qabto garoonka kooxda Arsenal ee Emirates Stadium.
Tyson Fury ayaa shaaciyay in ninka xayasiinta u qaabilsan uu ka diiday in kulanka ku celiska ah ee Wilder uu ka qabsoomo garoonka Arsenal wuxuuna doortay in garoonka Man United ee Old Trafford uu noqon doono kan loogu golayn doono isaga iyo Wilder.
Tyson Fury oo ka hadlaya in uu ninka xayasiinta u qaabilsan ee Frank Warren ka diiday garoonka Arsenal isla markaana uu Old Trafford doortay ayaa yidhi: “Frank Warren waxa uu sheegay Arsenal laakiin waxaan ku idhi: ‘Maya aan qaadano Old Trafford. Waxaan rajaynayaa in halkan aynu ku heli doono xagaaga”.
Feedhkii miisaanka cuslaa ee dhex maray Tyson Fury iyo Deontay Wilder ayaa ku dhamaaday barbaro 115-111, 112-114 ahaa waxayna labadooduba cadeeyeen in ay diyaar u yihiin kulan ku celis ah oo ka dhaci doona England maadama oo kulankii hore uu USA ka soo qabsoomay.
Deontay Wilder oo hore diyaar ugu ahaa in uu la dagaalamo ninka aan waligii isna guuldaraysan ee Anthony Jashua ayaa hadda diyaar u ah in uu Fury heshiis kale la galo wuxuuna si cad u sheegay in wixii uu Fury ka sameeyay Los Angeles uu mudan yahay in ay qaataan kulan kale oo ku celis ah.
Si kastaba ha ahaatee, Old Trafford ayaa marti galin kara kulan wayn oo dhex mari doona Tyson Fury iyo Deontay Wilder kaas oo si wayn caalamka u soo jiidan doona.